Uru nke oghere oghere Pragmatic - pisklak.net
Uru nke oghere oghere Pragmatic
Ọtụtụ ihe only mmadụ ga-eji na-egwu egwuregwu ntanetị na ihe kpatara akọwapụtaran’okpuru. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbụ kpochara ị nwere ike inwe ọtụtụ obi abụọ n’uche gị yana ọ dị mkpa ka ị nwee ike ikpochapụ ya. Ihe mbụ ịchọrọ ịma bụ uru dị na egwuregwu a yana ihe kpatara ị ga-eji tinye ego gị tupu ịmalite igwu egwuregwu ahụ. Egwuregwu a abụghị naanị maka mmeri ma ọ bụ ịla n’iyi mana o nwere ọtụtụ ihe na ya. Offọdụ ihe nwere ike ime ka ị kpọọ agenji pragmatị bụ:
Nweta ego karịa
Idn drama na-enyere ndị egwuregwu aka inweta real life. N’ụwa nke oge a, onye ọ bụla na-achọ ụzọ dị iche iche ha ga-esi bulie ibu ha nke obere akpa. Ego bụ ihe bụ ihe a na-achọkarị. Nke a bụn’ihi na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ọ bụ websiten’enyemaka self love ka ha ji ebi ndụ dị mma na afọ ojuju. Ọ bụrụ na ị chọrọ irite ọzọ self na-enye arọ gị pockets mgbe ahụ ị nwere ike igwu egwu oghere egwuregwu na irite a akpụ nchikota ego. Ọ bụ websiten’enyemaka nke self love a ka ị ga-enwe ike ibi ndụ okomoko.
Agen oghere pragmatic bụ oghere egwuregwu na-enye ndị mmadụ ụfọdụ ezumike na ntụrụndụ. Dika ekwuru unn’elu ndi mmadun’uwa ugbu an’enwe oru. Ha anaghị enwe oge iji zuru ike. Nke a bụ ihe only eji akpọ oghere egwu. Egwuregwu a ga-enyere ha aka izuike miniature nwee ike itinye uche d e ọrụ ha nke ọma. O di nkpa ka ndi mmadu mee ka obi ha zuru ike ka ha nwee ike itinye uche ha na ihe ndi ozo. Kedu ihe ga – akachasị mma karịa izu ike karịa igwu egwu egwuregwu oghere?
Usoro ntinye self
Ọ na-emekwa dị ka usoro itinye ego maka ndị mmadụ. Mgbe mmadụ chọrọ itinye ego ha chọrọ, ha chọrọ itolite n’ime otu afọ. Ọ bụrụn’ọchichọ ị ga – enwe ike inweta self ị ga – enwen’ọdịnihu maka ego ị buputara mbụ maka egwuregwu an’ime awa ole na ole. Egwuregwu a kachasị mma maka ndị chọrọ ịba ụba self ha ma achọghị itinye ego na ebe ndị ọzọ. Enwere ike ịkpọ un isi iyi nke itinye self ka ndị mmadụ na – enweta self okpukpu abụọ ma ọ bụ ọbụna okpukpu atọ ma ọ bụrụ na ha enwee mmeri iji merie egwuregwu nke agen slot pragmatic
Gwuo ebe ọ bụla
Otu ekwesighi ileta cha cha ọ bụla ma ọ bụ ụlọ mmanya. Egwuregwu otu nwere ike zuru iken’ụlọ ha ma jide smartphone Ha nwere ike chọọ egwuregwu ha chọrọ igwu ma họrọ egwuregwu ahụ. Achọpụtala ọzọ ha nwere ike igwu egwuregwu ahụ website t ebe ọ bụla ha nọ. Enweghi ihe mgbochi ala nke gbochiri gbochie ndi mmadu igwu egwu dika agen slot pragmatic. Idn egwu ma kpata ego enwere ike iji mee ihe ịchọrọ. Egwuregwu a bụ ihe na-atọ ụtọ.